Osimiri Puerto de Santa María: si La Puntilla ruo La Calita | Njem akụkọ
Louis Martinez | 29/04/2022 12:00 | España, Osimiri
na osimiri nke Puerto de Santa Maria Ha so na ndị kacha mma na Spain. Ọ bụghị n'efu ka etinyere ha na ihe dị oké ọnụ ahịa Bay nke Cadiz n'akụkụ ndị San Fernando, Chiclana nke oke ma ọ bụ Royal Port. Ha niile nwere ọmarịcha aja ọla edo nwere mmiri doro anya kristal.
Na mkpokọta, e nwere kilomita iri na isii nke osimiri na-asa ahụ site na osimiri atlantic nke na-enye gị nkasi obi na ọrụ niile. Ọ bụrụ na ị gbakwunye ihe a niile ihu igwe nke mpaghara, mgbe niile na-atọ ụtọ ma na ọtụtụ awa nke anwụ, ị nwere ihe niile ị ga-eji na-ekpori ndụ n'ụsọ osimiri nke Puerto de Santa María. Ka ị wee họrọ nke kacha amasị gị, anyị ga-eso gị gabiga ha.
3 Santa Catalina, otu n'ime osimiri dị na Puerto de Santa María zuru oke maka ikuku ikuku
4 Osimiri Levante
7 The Wall na La Cove
8 Ọ nwere oge ọ dị mma ịnụ ụtọ osimiri Puerto de Santa María?
9 Kedu ihe ị ga-ahụ na Puerto de Santa María?
Mmiri na-agbaji si n'akụkụ osimiri Puntilla
Emebere ya site n'ọnụ nke Osimiri Guadalete na agba osimiri, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị mita itoolu n'ogologo na nkezi obosara nke ihe dị ka iri itoolu. N'ịbụ ndị dị nso n'obodo ahụ, ọ na-ewu ewu nke ukwuu. Ma ọ dịkwa nso ọhịa pine na dunes nke San Antón, ebe ị ga-ahụ ebe a mara ụlọikwuu.
Ọzọkwa, àgwà ya nke osimiri ndị mepere emepe pụtara na ọ nwere ọrụ niile. O nwere otu onyunyo na nnapụta ndị nwere ụgbọ mmiri na ọbụna ụgbọ ihe mberede na ngwụsị izu. Ọ na-enyekwa gị ụlọ mposi na ịsa ahụ, ebe egwuregwu na ngwa enyemaka mbụ. N'ikpeazụ, ọ na-emegharị ohere maka ndị nwere nkwarụ na ọbụna oche pụrụ iche maka ha ịsa ahụ.
Ọ bụ, kpọmkwem, na-esote nke gara aga, dị ka a makwaara dị ka Colorá. Ya mere, ọ bụ n'etiti Mkpịsị y ọdụ ụgbọ mmiri sherry, ọmarịcha egwuregwu na njem nlegharị anya nke Puerto de Santa María. Ị nwere ike ịnweta mpaghara aja a site na Avenida de la Libertad.
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị mita asatọ n'ogologo na nkezi obosara nke iri na anọ. N'otu aka ahụ, ọ na-enye gị ọrụ ịdị ọcha na ịsa ahụ niile. Ị ga-enwe mmasị ịmara na ọ bụ ụlọ a ebe ihe ochie Archaic Lower Paleolithic. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ iberibe ihe ndị dị na ya, ị ga-ahụ ha na ọchịchị Museum si Puerto de Santa Maria.
Santa Catalina, otu n'ime osimiri nke Puerto de Santa María zuru oke maka windsurf
Ọ bụ, yana ndị Levante na Valdelagrana, nke anyị ga-ekwu maka ya ma emechaa, osimiri kachasị ukwuu n'etiti ndị obodo Andalusian a. Ọ dị ihe dị ka puku mita atọ n'ogologo na iri anọ n'obosara. Na mgbakwunye, ọ na-agụnye ọtụtụ obere ájá ájá. Kpọmkwem Ndị nke Vistahermosa, Red Crab, El Buzo, El Ancla na Las Redes.
Ọ nwekwara ọrụ niile ị nwere ike ịchọrọ. N'ime ha, ndị nchekwa ndụ nwere ụgbọ mmiri na ụlọ nche, ngwa enyemaka mbụ, ụlọ mposi na ịsa ahụ. The osimiri bụ na udi nke a cordon na ị nwere ike ịnweta ya ma si Rota ụzọ na si urbanizations dị n'ógbè ahụ.
Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, anyị ga-agwa gị na mmiri ya dị ntakịrị oyi karịa nke ndị ọzọ n'akụkụ osimiri nke Bay of Cádiz. Ma karịa ihe niile, ọ bụrụ na-amasị gị windsurf ma ọ bụ kitesurf, Santa Catalina zuru oke maka ịme ma n'ihi ihu igwe ya na ebili mmiri ya.
Ọdịdị mara mma nke osimiri Levante
N'etiti osimiri nke Puerto de Santa María, nke a na-anọchi anya obi ụtọ eke, ebe ọ bụ na ọ dị n'etiti ogige Bahía de Cádiz. N'ezie, ọ na-ejikọta ebe mmiri mmiri dị n'akụkụ ọnụ nke Osimiri San Pedro na dunes ndị ọzọ.
N'ihe dị ka puku square mita anọ n'ogologo na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu narị n'obosara, ọ nwere obere mpaghara naturism. Ọ dịkwa mma maka ịme egwuregwu mmiri dị ka sọfụ. N'aka nke ọzọ, ịnọ na ogige ntụrụndụ eke, ị ga-aga ije ma ọ bụ jiri igwe kwụ otu ebe gaa na ya (o nwere ohere ịdọba ha).
N'otu aka ahụ, site na osimiri ọtụtụ ụzọ ụkwụ dị ka nke na-eji ohere ụgbọ okporo ígwè ochie si Jerez gaa Trocadero, nke bụ, n'ụzọ, nke mbụ na Andalusia. Ọtụtụ njegharị nke ebe akụkọ ihe mere eme na mpaghara. N'etiti ndị a ochie nnu flats nke Algaida, ebe ndị agha nke Napoleón n'oge Agha nke nnwere onwe ma ọ bụ tunnels nke ochie Andalusian Steel Company.
N'ikpeazụ, osimiri Levante nwere ahụike, ọrụ nchekwa na nnapụta, yana ịsa ahụ. Ma, nke ka mkpa, a na-edozi ụlọ mposi maka ndị nwere ọrụ dịgasị iche iche.
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị mita ise n'ogologo na ihe dị ka iri anọ n'obosara. Ma o nwere ebe izu ike nke puku square mita ise. Ọ na-emi odude n'ụkwụ nke a ọnụ ọnụ ugwu, n'etiti Rota Naval Base na obodo mepere emepe nke weere aha ya.
Ị nwere ike ịnweta ya site n'ịga ije n'okporo ụzọ awara awara ma emebere ya maka ndị nwere ụdị ọrụ dị iche iche. O nwekwara ụlọ mposi na ebe ịsa ahụ, ndị nchekwa ndụ, oghere iji dọba ịnyịnya ígwè na ọbụna a mmanya osimiri. Ihe ndị a niile na-eme ka ndị njem nlegharị anya nke mba na ndị si ná mpụga Spen bịa na-enwe ekele dị ukwuu.
Valdelagrana, otu n'ime osimiri kacha mma na Puerto de Santa María
Ọ dị n'etiti ọnụ nke Osimiri Guadalete na osimiri Levante, nke anyị gwaworo gị banyere ya. Ogologo ya dị ihe dịka puku mita abụọ na obosara nke ihe dịka iri asaa. A na-eme ya ka shei wee si na ya na-aga. eme mkpagharị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu puku mita na narị ise ebe, na mgbakwunye na ịga ije, ị nwere ike ịnụ ụtọ ọtụtụ ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Otú ọ dị, o nwekwara ụzọ ịgba ígwè nke na-eduga gị n'ọgba aghara dị egwu nke ụlọ nnu. O zuru oke maka izu ike, kamakwa maka ime ihe windsurf na kitesurf. Ọ na-enye gị ohere ịhụ ọmarịcha echiche nke obodo Cádiz.
Maka izu ike, ị kwesịrị ịma na ọ nwere hammocks na nche anwụ maka mgbazinye. O nwekwara oche ịsa ahụ emeziri maka ndị nwere ọrụ dị iche iche na ọrụ nchekwa ndụ yana mgbazinye ụgbọ mmiri pedal. Ị nwere ike ịbanye n'akụkụ osimiri Valdelagrana ma jiri ụkwụ na igwe igwe ma ọ bụ n'okporo ụzọ CA-32, ma ọ bụrụ na ị jiri ụgbọ ala bịa.
The Wall na La Cove
The mgbidi osimiri
Anyị na-etinye ndị a abụọ osimiri ọnụ n'ihi na ha na-na-kewapụrụ site mkpọmkpọ ebe nke nnukwu ụlọ nke Santa Catalina, Ebe e wusiri ike nke dị n'ụsọ oké osimiri sitere na narị afọ nke XNUMX nke na-enye ha ikuku pụrụ iche ma na-echetara ụsọ mmiri aja nke Caribbean. Ọ bụrụ na-amasị gị foto, na mgbakwunye, na ndị a osimiri ị ga-enweta ọmarịcha ọdịda anyanwụ.
Mgbidi ahụ dị naanị narị mita atọ na iri ise n'ogologo na mita iri ise n'obosara. Agbanyeghị, o nwere ụlọ mposi na ebe ịsa ahụ. Ọzọkwa, ọ pụtara ịbụ otu n'ime ihe kacha echebe nke ọdụ ụgbọ mmiri Cadiz niile. Ị nwere ike iru ya n'ụkwụ site na Avenida de la Libertad ma ọ bụ jiri igwe kwụ otu ebe n'okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe. Ị nwere ebe ị ga-adọba ụgbọala.
N'akụkụ ya, La Calita, nke dị n'akụkụ nke ọzọ nke nnukwu ụlọ ahụ, dị ihe dị ka narị mita ise n'ogologo na ihe dịka mita iri na ise n'obosara. Agbanyeghị, ụzọ kacha mma iji ruo ya bụ site na okporo ụzọ si Puerto de Santa María na-aga Rota. Ị ga-eme njem n'okporo ámá isi Vistahermosa obodo wee tụgharịa aka ekpe. Dị ka nke gara aga, ọ na-enye gị ụlọ mposi na ịsa ahụ.
N'aka nke ọzọ, mpaghara a nke ógbè Cádiz ka nwere osimiri ọzọ. Ọ bụ banyere Ọchịagha. Agbanyeghị, ị gaghị enwe ike ịnụ ụtọ ya, ebe ọ bụ na etinyere ya n'ime ọdụ ụgbọ mmiri Rota nke a kpọtụrụ aha.
Ọ nwere oge ọ dị mma ịnụ ụtọ osimiri Puerto de Santa María?
The climatology na mpaghara a nke Bay of Cádiz ọ dị mma. Ya mere, ị nwere ike ịnụ ụtọ osimiri ya mara mma ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ niile. Kpọmkwem, ihu igwe bụ subtropical-Mediterranean. Oge oyi na-adị obere ma oge ọkọchị na-ekpo ọkụ, mana na-enweghị oke ọkụ. Nke ikpeazụ bụ n'ihi ifufe si n'Oké Osimiri Atlantic.
Mana nke ka nke, mpaghara ahụ pụtara ìhè maka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke awa anwụ: ihe karịrị puku atọ kwa afọ. Dị ka nke a si kwuo, mmiri ozuzo dị ụkọ (ihe dịka 400 mm). Echefula na a na-akpọ mpaghara mmetụta Cádiz Ọ bụ Costa de la Luz.
Maka ihe niile anyị kọwaara gị, ma njedebe oge opupu ihe ubi na mmalite nke ụbịa na-adị mma iji kporie ndụ n'akụkụ osimiri nke Puerto de Santa María. Ma oge kacha mma ime ya bụ, ezi uche, okpomọkụ. Ọ bụkwa oge ị ga-adaba na ọtụtụ ndị njem nlegharị anya, n'agbanyeghị na ị gaghị akwụsị ịnụ ụtọ osimiri ndị a mara mma maka nke ahụ.
Kedu ihe ị ga-ahụ na Puerto de Santa María?
Castillo de San Marcos, otu n'ime ihe ncheta nke Puerto de Santa María
Anyị enweghị ike imecha njem a nke osimiri dị na mpaghara Cadiz na-ekwughị na ịgafe ụfọdụ ihe ncheta ị nwere ike ịga ebe ahụ. Abụọ pụtara nke ọma na Puerto de Santa María. Ọ bụ ihe na-amanye San Marcos Castle, ụlọ nsọ ewusiri ike nke e wuru na narị afọ nke XNUMX na ụlọ alakụba Arab ochie na ndị Major Priory Church, nke e wuru na njedebe nke narị afọ nke XNUMX, ọ bụ ezie na e wughachiri ya na XNUMXth (ya mere ihe ndị baroque na-enweghị mgbagha).
Mana ị nwekwara ike ịga leta okpukperechi na ncheta obodo na obodo Cadiz. N'ime ndị mbụ, ndị ebe obibi ndị mọnk mmeri, ebe obibi ndị mọnk nke Mmụọ Nsọ na echiche dị njọ ma ọ bụ hermitage nke Santa Clara. Na, dị ka maka sekọnd, ndị ụlọ Vizarron, Obí nke Araníbar, Chargers na Indies na Álvarez-Cuevas ma ọ bụ Old Lonja del Puerto.
N'ikpeazụ, anyị egosila gị ihe kacha mma osimiri nke Puerto de Santa Maria. Ha niile mara mma ma nwee ọtụtụ ọrụ. Mana were ohere ị gaa na obodo Cadiz nwee ọmarịcha ihe ncheta ya. Ịchọghị ịma mpaghara a nwere ùgwù Spain?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Osimiri Puerto de Santa María